चुरेमा सरकारको गिद्धे दृष्टि किन ? - Tulsipur Online
चुरेमा सरकारको गिद्धे दृष्टि किन ?
Posted by Admin | २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार २१:४६ |
नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्बजनिक गरे लगत्तै एकाएक भाइरल बनेको बिषय हो चुरे । आजभोलि सबैतिर चुरे ब्यापक चर्चा परिचर्चाको बिषय बनेको छ ।
आजकाल कहाँ छैन चुरेको चर्चा ? होटल,मेलापात,पानी पधेंरो,फेसबुक,ट्वीटर,टिकटक ,टेलिभिजन ,रेडियो , देश बिदेश सबैतिर आज ब्यापक चर्चा छ, चुरेको । यस्तो बहुचर्चित चुरे बास्तवमा के हो ? यसको के महत्व छ ? यसको दोहनको असर के हो ? यसमा सरकारको गिद्धे दृष्टि किन ? आज म यी प्रश्नहरुको उत्तर खोतल्ने प्रयास गर्नेछु ।
वास्तवमा के हो चुरे ?
नेपालको पूर्व इलामदेखिदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म करिब ३६ जिल्लालाई छुदैँ गएको बिश्वकै कान्छो पहाड हो, चुरे । यसले नेपालको कुल भुभागको करिव १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यसलाई चुरिया या शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ । यो खुकुलो पत्रे चट्टान, नरम माटो आदि मिलेर बनेको छ ।
यसको उत्तरतिर मध्यपहाड,उच्च पहाड हुँदै हिमाल अबस्थित छ भने दक्षिणतिर गिट्टी ,बालुवा,कंकड आदि मिलेर बनेको भावर क्षेत्र तथा तराई मधेश रहेको छ । हाम्रो देशको सम्पूर्ण तराई मधेशसित जोडिएका घना जंगल सहितको होचो पहाडी श्रृङखला हो चुरे । यसका साथै स्थानीय,राष्ट्रिय र अन्तराष्टिय सरकारी तथा गैरसरकारी चोर तस्करहरुले जथाभाबी दोहन गरेर चरम अन्याय ,अत्याचार,शोषणमा परेर निरीह बनिरहेको पृथ्वीको एउटा भाग हो, चुरे ।
के छ यसको महत्व ?
यो नेपालको एउटा महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । किनकि नेपालको कुल जंगलको झण्डै ७३ प्रतिशत भाग यसले ओगटेको छ । यसभित्र हजारौँ प्रजातीका बहुउपयोगी बनस्पतिहरु पाईन्छन् । यी बनस्पतिहरुको उपयोग गरेर यो भुगोलभित्र चराचुरङ्गी,जनावर,किरा फट्याङग्राहरुलगायत हजारौँ बन्यजन्तुहरुको जीवन प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ ।
ती बन्यजन्तुहरु मध्ये केही लोपोन्मुख छन्, भने कुनै संकटापन्न अबस्थाका छन् । यो क्षेत्रमा त केही यस्ता जीबहरु छन्, जो नेपालमा मात्र पाईन्छन् । यसकारण यो क्षेत्र जैबिक बिबिधताको असाध्यै धनी क्षेत्र हो । यहाँ उपलब्ध जैबिक र भौगोलिक बिबिधताले तराई मधेशको मात्र नभएर सिंगो राष्ट्रकै शोभा बढाएको छ । यो क्षेत्र भएर बग्ने साना ठूला नदीनालाहरु र बर्षाको पानी सोसेर भण्डारण गर्ने भएकोले यो पानीको निकै ठूलो भकारी पनि हो ।
यसकारणले गर्दा हाम्रो तराई मधेशमा निरन्तर पानीको रिचार्ज भइरहेको हुन्छ र जो पानी प्रमुख रुपले भूमिगत पानीको रुपमा जम्मा भइरहेको छ । त्यही पानी हाम्रो तराइ मधेशलाई आवश्यक पर्ने कृषी, सिंचाइ,माछापालन,विकास निर्माण,पर्यटन ,सरसफाइ,पिउनेलगायतका बिभिन्न कार्यहरुमा उपयोग भइरहेको छ । यही पानीले हाम्रो सिंगो तराइ मधेश सिंचिएकै कारणले गर्दा यसलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ । यहाँ उत्पादित अन्नले सिंगो मुलुककै पेट भरिरहेको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको बहुसंख्यक मानिसहरुको बसोबास तराइ मधेश तथा भित्री मधेशमा भइरहेको छ । यो जनसंख्याको धर्म,कला,संस्कृति,जीवनशैली र समग्र जनजीबिकाको प्रक्रिया प्रत्येक्ष एबम् अप्रत्यक्ष रुपले चुरेसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि चुरेले तराइ मधेशलाई आबश्यक पर्ने गास ,बास ,कपास र समग्र जीवन दिएको छ ।
देश बिकासको प्रक्रियासँगै आज द्रुतगतिमा विकासका बिभिन्न पुर्बाधारहरुको निर्माण्को काम पनि निरन्तर चरिहेको छ । सिंगो राष्ट्रलाई चाहिने गिट्टी ,बालुवा,सिमेन्ट ,काठ आदि सबै कुराहरु पनि यही चुरेले उपलब्ध गराइरहेको छ । यही चुरेकै कारणले गर्दा आज हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेका छौँ । चुरेले तराई मधेशको मात्र नभएर सिंगो नेपालको पर्यावरणलाई समेत बचाईरहेको छ ।
चुरेको बिनासले नेपाललाई के असर पर्छ?
चुरेको बिनास भयो भने तराई मधेशमा पानीको रिचार्ज प्रक्रिया अबरुद्ध भई त्यहाँको पानी सुक्छ । सिंगो तराई मधेशमा मरुभूमिकरण हँुदै जान्छ । जसले गर्दा त्यहाँ अनाबृष्टि,अतिबृष्टि,अल्पबृष्टि, बाढी,पहिरो,डुबान,भोकमरी जस्ता महाबिपत्तिहरुको सिर्जना हुदै जान्छ । नदीको सतह गहिरिदै जान्छ । त्यहाँको मरुभूमिका कारणले सिर्जित उच्च तापमानले गर्दा हिमालयको बरफ पग्लिदै जान्छ । जसले गर्दा हिमालयको शोभा समाप्त हुँदै जान्छ ।
हिमाल पहाडमा बाढी , पहिरो र तराईमा डुबान हुनुका साथै पुरै देशमा जलवायु परिबर्तनको बिकराल समस्या उत्पन्न हुँदै जानेछ । अन्ततः एउटा चुरेको बिनासले मात्रै पनि तराईको मात्र नभएर सिंगो मुलुककै जनजीवन र प्रयावरणमा गम्भीर संकट पैदा गर्नेछ । चुरे तराई मधेशको मात्रै नभएर सिंगो नेपाल राष्ट्रकै सुरक्षाकवच हो । त्यसकारण ,चुरे संरक्षणको विषय तराई मधेशको मात्र नभएर यो त समग्र राष्ट्रिय चासो,चिन्ता र महत्वको सवाल हो र हुनुपर्छ ।
बिगत लामो समयदेखि यसैपनि चुरे बिभिन्न दलाल,तस्कर र चोरहरुबाट निरन्तर अतिक्रमणमा परिरहेको अबस्था छ । यसको संरक्षणका लागि भनेर स्वयं सरकारले पनि बर्षेनी अरबौँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, भने कैयन सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पनि यसका निम्ति क्रियाशील छन् । तर पनि यसको अबैध दोहनको काम रोकिएको छैन् । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा पनि सरकारले एकातिर चुरेकै संरक्षणका लागी भनेर केही बजेट छुट्याएको छ भने अर्कोतिर ब्यापार घाटा अन्त्यका लागि भनेर चुरेलाई उत्खनन् गरी त्यहाँको गिट्टी बालुवा भारतलाई बेच्ने भनेको छ ।
यो आफैमा निकै बिरोधाभाषपूर्ण बिषय हो । के यसरी चुरे बेचेर देशको ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ? के अब चुरेको गिट्टी बालुवा यो देशलाई आबश्यकै छैन् ? के यो देशमा भबिष्यमा गिट्टी बालुवा नै नचाहिने गरेर यहाँको बिकास निर्माणको कार्य सम्पूर्ण रुपले सम्पन्न भइसकेको हो र ? यो सरकारले दलाल पुजिपति र बिदेशीको हातमा सिंगो चुरे पहाडै सुम्पिदिँदा त्यसको दिर्घकालीन असर के पर्छ ? यो सरकारले त्यसको अलिकति पनि हिसाब किताब गरेको छ कि छैन्? आफैमा चरम अन्यायमा परिरहेको यसको संरक्षणमा लाग्नुको बदला उल्टै चुरेमा सरकारको गिद्धे दृष्टि किन ?
महाकाली कारोबारको लिखतमा आँखा चिम्लेर दाहिने देब्रे ल्याप्चे ठोकेका केपी कमरेडले आज चुरे पहाड बेच्दै गर्दा भोलि सगरमाथा,रारा,फेवा हुँदै अन्ततः सिंगो नेपाल राष्ट्र नै बेच्न के बेर ? यसरी हामी जो कोहीले पनि ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ कि सरकारको चुरे पहाड बिदेशीलाई बेच्ने कदम चरम राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कत हो । चुरे पहाडलाई बेचेर सरकारलाई तत्कालीन रुपमा हुने फाइदा भन्दा त्यसको लाखौँ गुणा बढी दिर्घकालीन नोक्सान हाम्रो देशलाई पर्नसक्ने हेक्का यो सरकारलाई छ कि छैन् ?
यस्तो जघन्य अपराध गर्न यो सरकार किन बाध्य भयो ? जवाफ प्रष्ट छ ।यो सरकार मुलतः ठूला–ठूला भ्रष्टाचार,दलाल,तस्कर र ठगहरुले चलाईरहेको छ । यो सरकारले बेला न कुबेलाको चुनाबको घोषणा गरिसकेको छ । त्यो चुनाबमा यो सरकार चलाइरहेको दललाई ठुलो धनराशीको आबश्यकता पर्नेछ । किनकि यसले जसरी पनि चुनाब जित्नै पर्नैछ ।
यसरी चुनाबको मुखमा सिंगो चुरे पहाडै झण्डै घुइयाको भाउमा देशी बिदेशी तस्करको हातमा सुम्पिदिँदा एकातिर कमिसनस्वरुप अरबौँ रकम केपी कमरेडलाई हात पर्नेछ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारका तर्फबाट यो उपहार बक्सिस भइसकेपछी दिल्ली दरबारबाट यताको सत्ता टिकाइराख्ने आर्शीवाद पनि निरन्तर प्राप्त भइरहने छ । यसका साथै यो सरकारका धेरैजसो मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले नै तराइ मधेशमा ठुला ठुला क्रसर उद्योगहरु चलाइरहेका छन्। यसरी देशी बिदेशी तस्करहरबाट आगामी चुनाबका निम्ति प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र चरम संकटमा परेको सत्ता टिकाइराख्ने आर्शीवादका खातिर यो गम्भीर देशद्रोही हर्कत गर्न सरकार बिवस भएको तथ्य यो दुनियामा दिनको घामझैँ छर्लङ्ग छ ।
अन्त्यमा,यो सरकारले आफ्नो तर्फबाट चुरे पहाड बेच्ने निर्णयको घोषणा त सारा बिश्वले थाहा पाउने गरेर सार्बजनिक रुपमा गरी नै सक्यो ।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले त जनस्तरबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै खुलारुपमै भनिसकेका छन कि हामीले हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने हो ।हामीसँग चुरे भएकोले चुरे बेचेको ।
उनले जनताको प्रश्नको बडो सरल तरिकाले लाजै नमानी जवाफ दिइसकेका छन् ।यसको अर्थ यो सरकार यति जघन्य जनघाती र राष्टघाती काम गर्दा पनि आफूले धेरै महान काम गरिरहेको जस्तो महाभ्रमको सिकार बनिरहेको छ । जसले गर्दा यो सरकार यस्तो राष्टद्रोही कदमबाट आफैँ पछी हट्ने कुनै संभावना छैन् ।त्यसैले सरकारका यो र यस्तै राष्टघाती कदमहरुको खारेजीका निम्ति सम्पुर्ण नेपाली जनसमुदायहरुले आ आफ्नो दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्टब्यापी रुपमा शसक्त प्रतिवाद गरौँ । (लेखक रुकुम पश्चिम स्थित शीतल माध्यामिक विद्यालय चौरजहारीका शिक्षक हुन् ।)
Previousवन प्राविधिक समाजद्धारा राहत वितरण
Nextप्रहरीको व्यवहारले बिझाएको शिक्षकको मन